သင်၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - - သင်မြည်းစမ်းဖို့ရှိသည်ကြောင်းကင်ဘာဂါများအတွက်2သက်သတ်လွတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - သငျမြည်းစမ်းဖို့ရှိသည်ကြောင်းကင်ဘာဂါအတွက် "2 သက်သတ်လွတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဆိုပါသက်သတ်လွတ်ဘာဂါရိုးရာဘာဂါတစ်မူကွဲရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားချက်ပြုတ်နည်းများဆေးဘက်သို့မဟုတ်လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများမပယ်မရှားပါဘူးသူကလူတွေကိုရန်အလွန်ကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လုံးဝအရသာနေသောသက်သတ်လွတ်ဟမ်ဘာဂါအသားကင်, နှစ်ခုချက်ပြုတ်နည်းများကိုရှာဖွေဤနေရာတွင်ပူဇော်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
ဤရွေ့ကားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုပိုမိုစက်ရုံအစားအစာများကိုစားရန်မြန်ဆန်မူရင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကယ်လိုရီအတွက်အရသာအခြားနည်းလမ်းများနှင့်အနိမ့်ကြောင့်သက်သတ်လွတ်ဘာဂါ၏စားသုံးမှုတဖြည်းဖြည်းကမ္ဘာတဝှမ်းတိုးပွားစေပါသည်။ တစ်ဦးအဆုံးမဲ့မူကွဲ, ထိုမှတပါး, ရှိပါသည်။ ဤတွင်ငါတို့သည်သင်တို့နှစ်ဦးကိုဆက်ကပ်။ အကောင်းဆုံးကိုသင်၏အရသာကိုက်ညီသောတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့ခါးစညျးရှေ့ဖုံးပါ!
1 ။ သက်သတ်လွတ် quinoa အခြေစိုက်အသားကင်
သက်သတ်လွတ်အသားကင်အခြေစိုက်စခန်း တောင်အမေရိကားမှထွက်သောချက်စားလို့ရသည့်အစေ့တစ်မျိုး ကယ်လိုရီအတွက်အနိမ့်များမှာနှင့်ကျန်းမာရေးတို့အတွက်အကျိုးရှိသောအာဟာရဆံ့။ Quinoa အထူးသံနှင့်ကယ်လစီယမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်း, ဗီတာမင် B, C နှင့် E နှင့်မရှိမဖြစ်သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာရွက်ပြင်ဆင်ထားရန်လွယ်ကူသည်နှင့်ပိုပြီးစက်ရုံအစားအစာများကိုစားရန်ကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အပါအဝင်ထင် ကလေးများ ဒီဟု။
200 ဆ quinoa
70 ဆ oat အလွှာ
30 ml ဟင်းသီးဟင်းရွက်နို့
parsley, စမုန်ဖြူနှင့် oregano
ပထမဦးစွာဆေးကြောပါနဲ့သုတ်ပု quinoa နှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဆယ်မိနစ်ပြီနောက်ဟင်းထဲမှာပြုတ်ဖို့ဆောင်ခဲ့ကြ။
တစ်ဆန်ခါမှတဆင့် quinoa ပျံ့နှံ့နောက်ပိုင်းတွင်ဘို့ဘေးဖယ်ထားကြ၏။
ကြက်သွန်, ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ leeks Peel နဲ့ julienne သို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များခုတ်ဖြတ်။
သင်တစ်ဦးဿုံချောမွေ့ရသည်အထိသင်ရုံတစ် Blender နှင့်ရောစပ်အတွက်ဖြာသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များထားပါ။ ဆန္ဒရှိပါကတစ်ဦး Blender အတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြတ်သန်းမီ, သငျသညျချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီမလိုအပ်ပါဘူး။ ထို့အပွငျကအချိန်ပိုမိုယူပါလိမ့်မယ်။
quinoa, Oats, ဆားနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုနံ့သာမျိုးကိုချက်ပြုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နို့, ထည့်ပါ။ ကောင်းစွာအရာအားလုံးမွှေပေးပါ။
သင့်လျော်သောပုံ breadcrumbs နှင့်ပမာဏအတွက်မွှေပေးပါ။ အဆိုပါအယူအဆကိုတစ်ဦးတသမတ်တည်း texture ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချက်ပြုတ်သည့်အခါအသားကင်ပုံသဏ္ဍာန်ယူနိုင်အောင်နာရီအနည်းငယ်များအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အရောအနှောထားပါ။
ချက်ပြုတ်သည်ကိုသင်ဒယ်အိုးဖုတ်သို့မဟုတ်ကြော်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်သံလွင်ဆီနှင့်ပူပြင်းတဲ့အလုံအလောက်ဒယ်အိုးပေါ်တွင်သင်ဒုတိယ option ကိုရွေးချယ်ထားလျှင်, သင့်သက်သတ်လွတ်ကြော်တုံး။ ထို့နောက်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါနှင့်အတူပိုလျှံရေနံဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ သငျသညျမုန့်ဖုတ်များအတွက်ရွေးချယ်ထားလျှင်တစ်ပန်းကန်ပေါ်တွင်အသားကင်နေရာတို့ကိုအသီးအသီးအခြမ်း180ºC (အပူတက်ဆင်း) ရက်နေ့တွင်ဆယ်မိနစ်များအတွက်ချက်ပြုတ်ကြကုန်အံ့။
သင့်ရဲ့သက်သတ်လွတ်အသားကင်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘာဂါစီးပါလိမ့်မယ်သင်ပါလိမ့်မယ်။ အစာစားချင်စိတ်ဘွန်!
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: အားကစားသမားများအတွက်သက်သတ်လွတ်အစားအစာ: ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့စဉ်းစားပါသင့်သလဲ
2 ။ ဆန်အနေဖြင့်အသားကင်သက်သတ်လွတ်
ဒီစာရွက်အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ဖွင့်ထား, ထိုကျနော်တို့များသောအားဖြင့်အိမ်မှာရှိသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျချက်ပြုတ်ဖို့အဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူးသောအခါထိုကြောင့်သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီစာရွက်အဘို့အဝင်ရောက်ခြင်း၏သွေးဆောင်မှုမှသွဇာလှမျးမိုးထံမှသင်တို့တားဆီးပါလိမ့်မယ် ပြီးသားကိုပြင်ဆင်ဟင်းလျာများနှင့်ultratransformés သငျသညျလှုံ့ဆော်မှုထဲက run တဲ့အခါမှာလကျထကျ ..
အညိုရောင်ဆန် 80 ဂရမ်
ပထမဦးစွာပီးလ်နှင့်အတူစတင်ကြက်သွန်နီ, မုန်လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူခုတ်ဖြတ်။ သင်ယခင်ကသံလွင်ဆီနှင့်ပေးဆောင်ရသောအပေါ်တစ်ဦးမီးဖိုပေါ်သူတို့ကိုချထားပါ။ အကြောင်းကိုတဆယ်မိနစ်အနိမ့်အပူကျော်Sauté။
အဆိုပါငရုတ်ကောင်းယခင်က peeled နှင့်ကုန်တယ်နှင့်အညိုရောင်ဆန်ချက်ပြုတ်ထည့်ပါ။ တစ်ဦးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအရောအနှောများနှင့်အရသာရရှိရန်ကောင်းစွာရောမွှေပါ။
အခုတော့သက်သတ်လွတ်ကင်လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမှုကိုပြုသောပြီးတာနဲ့မှရွေးချယ်ဖို့, cornmeal သို့မဟုတ်ပေါင်မုန့်အစအနအတွက်ဆမ်း။
သငျသညျအသားကင်၏ဘောဇဉ်ဖုံးလွှမ်းလျှင်ချက်ပြုတ်ဘို့အမျှ, ကျွန်တော်တစ်ဦးဒယ်အိုးထဲမှာထက်သူတို့ကိုဖုတ်သူတို့ကိုကြော်ရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။ ဒယ်အိုးထဲမှာသံလွင်ဆီ၏အကောင်းတစ်မိုးဖွဲအပူပေးပြီးဆီကိုအပူခြိနျလျော့မထားဘူးဒါကြောင့်အချိန်သင့်ရဲ့ကင်သက်သတ်လွတ်တဦးတည်းချက်ပြုတ်။
ချက်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပန်းကန်ပေါ်တွင်သင်၏အသားကင်နေရာ စုပ်စက္ကူ ပိုလျှံအဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်။
သင့်ရဲ့အသားကင်အဆင်သင့်များမှာ! ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘာဂါစီးနှင့်သင့်မုန့်ညက်ကိုခံစားမယ်။ အစာစားချင်စိတ်ဘွန်!
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: မှတ်ချက် တစ်အရသာသက်သတ်လွတ် Mayonnaise ကိုပွငျဆငျ
မုန့်သည်, ကျနော်တို့ multigrain ပေါင်မုန့်သို့မဟုတ် wholemeal မုန့်အဘို့အရွေးချယ်ရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။
သငျသညျမုန့်စားရန်မလိုချင်ကြဘူးလျှင်, ဒုံးပျံ-based ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူသုပ်, မုန်ညင်းငံပြာရည်သို့မဟုတ်အကောင်းတစ်ဦး vinaigrette ကောင်းတစ်ဦး option တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကဟင်းသီးဟင်းရွက်မုန့် (zucchini, squash, ဟင်းနုနွယ်ရွက်) အခြားဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အချိုပွဲအဘို့, ကောင်းတစ်ဦးသီးသောအသီးထက် သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကို! သင်သည်သင်၏အာဟာရလိုအပ်ချက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်သေချာစေပါလိမ့်မယ်။
ခရမ်းချဉ်သီး, သက်သတ်လွတ် Mayonnaise, pesto ငံပြာရည်, မုန်ညင်း, သက်သတ်လွတ်ဒိန်ခဲ, မှိုသို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှု၏အခြားအစားအစာ: သင်၏ဟမ်ဘာဂါတပ်ဆင်တဲ့အခါမှာ, သင်အောက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
သက်သတ်လွတ်ဖျော်ရည်ပြင်ဆင်ထားရန်3နည်းလမ်းများ
သက်သတ်လွတ်ဖျော်ရည်ရိုးရှင်းစွာကျပန်းမှာ "အစိမ်းရောင်" ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အရောနှောမရှိကြပေ။ အောက်တွင်ဖျော်ရည်ပြင်ဆင်ထားရန်သုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ Read more »